Wararkii ugu dambeeyay ee xiisaddii ka taagneyda qeybo ka mid ah GEDO - Caasimada Online
Home Warar Wararkii ugu dambeeyay ee xiisaddii ka taagneyda qeybo ka mid ah GEDO
Wararkii ugu dambeeyay ee xiisaddii ka taagneyda qeybo ka mid ah GEDO
Muqdisho (Caasimada Online) – Khilaafkii xooganaa ee muddooyinkii dambe ka dhex aloosna maamulada deegaanada Bohol-Garas iyo Qooneey ee hoostaga demada Luuq ee gobolka Gedo, ayaa xal kama dambeysa ah laga gaaray.
Guddoomiyaha cusub ee maamulka Gedo ee dowladda Soomaaliya, Axmed Buulle Gareed ayaa shaaciyey in xal laga gaaray khilaafkaas, kaasi oo ay xalintiisa ka qeyb qaateen maamulka Gedo iyo odayaasha dhaqanka.
Guddoomiye Buulle ayaa sheegay in khilaaf dambe oo ka dhex-mara maamulada deegaanadaas lagula xisaabtami doono cidda ka dambeysa sababtiisa, isagoona faray in maamulada Bohol-Garas iyo Qooneey ay si toos ah ula shaqeeyaan guddoomiya Luuq ee gobolka Gedo.
Qoraal kasoo baxay Xafiiska guddoomiye Buulle ayaa sidoo kale waxaa lagu shaaciyay Shan qodob oo lagu xaliyay khilafka ka dhex-jiray mas’uuliyiinta labada Maamul, kuwaas oo kala ah;
1: Degaannada Bohol- Garas iyo Qooneey ay yihiin labada degaan oo hoostaga degmada luuq, isla markaana uusan jirin degaan degaan kale hoostaga, sida ku cad xeerka u yaal degmooyinka dalka.
2: Guddoomiyaha degmada luuq uu mas’uul ka yahay sida ugu fudud ee deeqaha iyo macaawinada au hay’adaha safamalka u garsiin lahaayeen degaanadaas iyo degaannada kale ee Gobolka Gedo.
3: In maamulada degaannada Bohol- Garas iyo Qooneey la faraayo inay si toos ah ula Shaqeeyaan Guddoomiyaha degmada luuq ee gobolka Gedo.
4: In sidoo kale maamulada degaannada Bohol- Garas iyo Qooneey la faraayo inay laamaha amniga kala Shaqeeyaan wixii quseeya dhanka amniga ee degaanadooda.
5: In khilaaf dambe ee dhexmara labada degaan oo ay dad walaalo ah ku nool yihiin lagula xisaabtami doono cidda sababta khilafka yeelayo.